Gluten: Ahoana ny fanapoahana ny varimbazaha maoderina - Julien Venesson - AFRIKHEPRI
Gluten: Ahoana ny fomba famokarana varimbazaha maoderina - Julien Venesson
Iza i Francisco Del Rosario Sanchez, rain'ny fahaleovantenan'i Santo Domingo?
Ny fomba amam-panao maoderina manimba antsika
ÊAzo antoka ve fa tsara ny varimbazaha ho anao?
Mampirisika anao hihinana serealy be dia be, "ho an'ny fahasalamanao", ny manampahefana momba ny fanjakana, ny mpanamboatra sakafo sy ny mpanamboatra sakafo. Ny fanadihadiana nataon'ny Julien Venesson, mifanohitra amin'izany, fa raha manala ny varimbazaha amin'ny sakafonao ianao dia mety ho salama kokoa. Mba hampihena ny hanoanana eto amin'izao tontolo izao ary hampitombo ny vokatra, dia nanova tanteraka ny fototarazo ny agronomista. Niteraka karazan-java-manintelony izy ireo, Frankenblés: ireo ozinina maoderina ireo dia manankarena kokoa amin'ny gluten noho ny razambeny. Tsy hieritreritra mihitsy ny dokotera fa ny varimbazaha dia tompon'andraikitra amin'ny harerahana mivaingana, ny fandevonan-kanina sy ny fikorontanana ara-po, ny aretin'andoha, ny osteoarthritis, ny aretin-kozatra, ny neuropathie, na ny fanaintainan'ny hozatra! Ary na izany aza ... mbola lehibe kokoa: amin'ny olona izay voan'ny fototarazo, ny gluten dia manao detonator amin'ny aretina autoimmune: aretina celiac, aretina Crohn, sclerosis marobe, diabeta karazana 1, aretin'ny rheumatoid…
Ity boky ity dia manome anao famintinana ny fikarohana siantifika momba ny glides sy fanadinadinana manokana miaraka amin'ireo manam-pahaizana manokana eny an-kianja. Manome anao manokana ny fanalahidy hiarovana na hiverina amin'ny fahasalamana. Raha tsy manasitrana anao ny fanafody, dia mety ho fotoana hanontaniana ny zavatra ivoahanao izany.
Gluten - Ahoana ny fanapoahana ny varimbazaha maoderina (MEN.PROP.)
10,99€ ao amin'ny staoky
1 vaovao manomboka amin'ny 10,99 €
Vidio 10,99 €
tamin'ny 7 Jolay 2020 7:33 maraina
Daty namoahana 2013-12-04T00:00:00.000Z
Isan'ny Pages 224
Fanatrehana fanombohana - Matthieu Grobli
Jereo ny Lumumba (2000)